सुवासलाई जनार्दनको प्रश्न : संसद विघटनमा तपाईंको राय के हो ? – च्यालेन्ज नेपाल
सुवासलाई जनार्दनको प्रश्न : संसद विघटनमा तपाईंको राय के हो ?
challengenepal January 9, 2021
नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका प्रभावशाली नेता जनार्दन शर्मा प्रभाकरले प्रतिनिधि सभा विघटनप्रति संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई मौनता तोड्न आग्रह गरेका छन् । शनिबार दैलेखको दुल्लुमा आयोजित विरोधसभामा नेता शर्माले संविधानविपरित प्रधानमनत्रीले संसद विघटन गर्दा कसरी प्रधानमन्त्रीसँगै बस्नुभएको छ भन्दै प्रश्न गरे ।
संविधान निर्माणका बेलामा संविधान सभाको अध्यक्ष हुुनुहुन्थ्यो सुवासचन्द्र नेम्वाङ । आज यो संविधान अनुसार गठन भएको संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीसँग उहाँ कसरी बस्नुभएको छ ? उहाँले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ’, शर्माले भने,‘संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्दा उहाँ आज किन मौन हुनुहुन्छ ? म दैलेखको दुल्लुवाट सुवास नेम्वागलाई आग्रह गर्न चाहान्छु तपाइको राय के हो ? संसद विघटन गर्नेको पक्षपाती तपाइ हो वा होइन ?’शर्माले नेम्वाङलाई प्रश्न गरे ।
उनले भने, ‘तपाइले घोषणा गरेको संविधानमा, हामीले गरेको छलफलमा प्रधनमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने कुनैपनि अधिकार राखेका छैनौँ । तपाई बोल्नुपर्छ । तपाई कानुनको पनि प्रखर विद्वान पनि हो अहिले तपाइ मौन बस्दा प्रतिगमनको मतियार हो कि भन्ने जनतालाई शंका हुन नदिनुस ।’
उनले ओली कदमको राजनीतिक पार्टी, बुद्धिजीवी र प्रबुद्ध बर्ग सबैले प्रधानमन्त्रीले नभएको अधिकार प्रयोग गरेर संसद विघटन गरेको भनिएरहेको भन्दै अदालतले संविधानको सहि व्याख्या गर्नेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।
Tags: #challengenepal #challengeonlinetv CHALENGE ONLINE TV Challenge nepal च्यालेन्ज अनलाइन टिभी च्यालेन्ज नेपाल च्यालेन्जअन्लाइनटिभी च्यालेन्जनेपाल सुवासलाई जनार्दनको प्रश्न : संसद विघटनमा तपाईंको राय के हो ?
Previous कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन– जहाँ सक्नुहुन्छ त्यहाँ प्रचण्ड–नेपालको धज्जी उडाउनूस्,
Next आज राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्बोधन गर्ने